Mahajanga : tafara-dalana ny mozika, lalao sy fety anatin’ny « Star Tour » | NewsMada
Mahajanga : tafara-dalana ny mozika, lalao sy fety anatin’ny « Star Tour »
Par Taratra sur 19/08/2017
Tomefy olona eto Mahajanga. Mitohana ny fiara mihazo ny morontsiraka Grand Pavois eny Amborovy ny maraina, sy ny mihazo ny Bord ny hariva.
… Saika mpiala sasatra avokoa ireo, izay nampifanandrify ny fotoana tamin’ny “Star Tour”, ilay fetim-pianakaviana eto Mahajanga.
Vao ny andro voalohany, niara-dalana ny mozika, lalao sy fifaninanana isan-karazany ary ny fety. Ankoatra ny ranomasina ny torapasika, nanana fialamboly maro ireo fianakaviana nisafidy ny Grand Pavois. Teo ny lalao sy ny fifaninanana toa ny “beach soccer”, “beach volley”, “beach pétanque”, sns. Nanentana sy nizara tsiky teny an-tsefantsefany teny i Barhone, raha toa ka nampihetsika ny rehetra ireo mpikosoka kapilan’ny RDJ’s Team.
“Revy hafa mihitsy”, araka ny fomba fitenin’i Bahrone, kosa ny teny amin’ny Bord nanomboka ny tolakandro. Izy rahateo no nisahana ny fanentanana ny teo amin’ny “Espace karaoké”, ho an’ireo tia mihira. Amin’ny maha fetim-pianakaviana azy, tazana koa ny toerana ho an’ireo ankizy, misy kilalao samihafa.
Vao tolaka kosa ny andro, niakatra ny sehatra lehibe ry Fou Hehy, nitondra ny fanentanana izay mampiditra ihany koa ny fampisehoana goavana isan-kariva. Nanomboka izany i Dalvis, anisan’ireo mpanakanto ankafizin’ny tanora, na tompon-tany na vahiny, samy nanaraka ny hirany avokoa. Nanaraka avy eo i Nina’s sy ny tariny, izay elaela tsy niaka-tsehatra teto Mahajanga. Na nanolotra ireo hira rehetra tena hain’ny mpankafy aza i Nina’s, tsy nety afa-po ireo mpijery, ka mora foana tamin’ireo mpikosoka kapila ny nanohy ny fotoana tamin’ny fampandihizana. Fanombohana ihany iny, mba hafa ihany koa ny anio sy ny rahampitso.